Laba diyaaradood oo Khaad wada oo maanta kasoo degtay garoon ku yaala magaalada Qardho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Laba diyaaradood oo Khaad wada oo maanta kasoo degtay garoon ku yaala magaalada Qardho
Xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay si KMG ah u joojisay diyaaradihii qaadka keeni jiray dalka Soomaaliya ayaa waxaa go’aankaasi dowladda kasoo horjeestay maamuladda Puntland iyo Somaliland, islamarkaana sheegay inaanu saameyn ku yeelan doonin go’aanka dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Laba diyaaradood oo nooca Khaadka keena ayaa maanta kasoo degay garoon ku yaala magaalada Qardho ee xarunta gobolka Kar-kaar, halkaasi oo ah magaalo hoos-timaada maamulka Puntland.
Diyaaradahaan ayaa la sheegay inay ka yimaadeen dalka Kenya, waxaana ay keeneen Khaad badan, iyadoona magaalada Qardho uu maanta ka soconaayo ka ganacsiga iibka Khaadka, xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay si KMG ah u mamnuucday in Khaadka la keeno Soomaaliya.
Dhinaca kale, afhayeenka madaxtooyadda maamulka Puntland C/laahi Maxamed Jaamac (Quraan Jecel) oo dhawaantaan warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in go’aanka xanibaadda duulimaadka Khaadka aanu Puntland quseeyn, islamarkaana ay xur u yihiin inay Khaad keenaan deegaanada ay Puntland maamusho.
Ilaa iyo haatan lama oga jawaabta ay dowladda federaalka Soomaaliya ka bixin doonto, arrinta ay ku dhaqaaqday Puntland, waxaana ay arrintaan kusoo beegmaysaa xilli maanta magaalada Muqdisho iyo gobolada kale ee ku dhaw aanay wax Khaad ah la keenin.